Nahoana no Be dia Be ny Fijaliana?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Garifuna Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwangali Lingala Litoanianina Luo Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mizo Mooré Myama Nahuatl (Puebla Avaratra) Ngabere Norvezianina Nzema Oromo Ossète Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tseky Tshiluba Tsonga Twi Télougou Uruund Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Be dia be izao ny fijaliana ary tsy vitan’ny olona ny manafoana izany. Nahoana? Mila jerentsika aloha hoe inona no tena mahatonga ny fijaliana. Faly isika fa manampy antsika hahafantatra izany ny Baiboly. Hodinihintsika ato amin’ity lahatsoratra ity ny antony lehibe dimy mahatonga ny fijaliana ho be dia be. Asainay àry ianao handinika tsara izay lazain’ny Tenin’Andriamanitra.—2 Timoty 3:16.
TSY MAHOMBY NY FITONDRANA
‘Misento ny vahoaka raha ny ratsy fanahy no mitondra.’—Ohabolana 29:2.
Maro ny mpitondra manao didy jadona ka mampitondra faisana ny vahoaka. Tsy izy rehetra aloha no toy izany, satria misy tena te hanampy ny mpiara-belona aminy. Very maina anefa ny ezaka ataony rehefa tonga eo amin’ny fitondrana izy, satria matetika no manjaka ny ady seza. Mety hanararaotra fahefana koa izy mba hahazoany tombony, ka lasa mijaly ny vahoaka. Hoy i Henry Kissinger, Sekreteram-panjakana amerikanina taloha: “Ezaka tsy nahitam-bokatra sy faniriana tsy tanteraka no nanamarika ny tantara.”
Hoy koa ny Baiboly: “Tsy natao hitondra samirery ny fiainany ... ny olona.” (Jeremia 10:23) Tsy mahomby ny olombelona tsy lavorary, satria tsy ampy fahendrena sy tsy mahatsinjo lavitra. Raha tsy mahay mitondra samirery ny fiainany ny olona, ahoana moa no ahafahany mitondra firenena? Asehon’ny zava-misy, fa ny fitondrana tsy mahomby no mahatonga ny fijaliana matetika. Azonao àry ve hoe nahoana ny mpitondra no tsy mahavita manafoana ny fijaliana?
TSY METY NY ATAON’NY FIVAVAHAN-DISO
Hoy i Jesosy: “Raha mifankatia ianareo, dia izany no hahafantaran’ny olona rehetra fa mpianatro ianareo.”—Jaona 13:35.
Mampirisika ny olona hifankatia sy hiray saina ny mpitondra fivavahana, any amin’ny fivavahana samihafa. Tsy mahomby anefa izy ireo. Tsy tena mifankatia mantsy ny mpiangona ao aminy, fa mbola mifanavakavaka. Tsy manampy ny olona hifankatia ny fivavahana, fa vao mainka mahatonga azy hisaratsaraka sy hifanavakavaka ary hiady. Hoy ilay teolojianina atao hoe Hans Küng, tao amin’ilay bokiny hoe Ny Fivavahana Kristianina sy ny Fivavahana Maneran-tany (anglisy): “Ny fivavahana no rangory fototry ny afo tamin’ireo korontana ara-politika tsy voafehy indrindra sy feno habibiana indrindra.”
Maro koa ny mpitondra fivavahana milefitra amin’ny firaisana alohan’ny fanambadiana sy ny fanitsakitsaham-bady ary ny firaisan’ny samy lehilahy na samy vehivavy. Mihanaka àry ny aretina, betsaka ny bevohoka tsy manambady sy ny manala zaza ary ny tokantrano rava. Tsy lazaina intsony ny alahelo sy ratram-po aterak’izany.
TSY LAVORARY SY TIA TENA NY OLONA
‘Tsapaina ny tsirairay rehefa voasariky ny fanirian’ny tenany ihany, ka voafandrik’izany. Ary ny faniriana rehefa kolokoloina, dia miteraka fahotana.’—Jakoba 1:14, 15.
Tsy lavorary isika rehetra ka mora manao diso, ary tsy maintsy miady mafy mba tsy hanao “izay danin’ny nofontsika.” (Efesianina 2:3) Vao mainka sarotra resena ny fanirian-dratsy rehefa misy fahafahana hanatanteraka an’ilay izy. Mety ho loza ny vokany raha manaiky ho resy isika.
Hoy ilay mpanoratra atao hoe Phiroz Mehta: “Manana fanirian-dratsy isika, tia fahafinaretana loatra, tia tena, tsy mety afa-po, ary te halaza, ka izany no mahatonga ny ankamaroan’ny fijaliana.” Olona maro nohajain’ny fiaraha-monina no nanimba ny fiainany satria tsy nahafehy tena teo amin’ny resaka toaka, zava-mahadomelina, filokana, firaisana, sy ny sisa. Lasa nijaly koa ny fianakaviany sy ny namany ary ny olon-kafa. Marina foana àry ity voalazan’ny Baiboly ity: “Fantatsika mantsy fa mbola miara-mitoloko sy miara-mijaly foana ny zavaboary rehetra mandraka ankehitriny.”—Romanina 8:22.
MANJAKA NY ANJELY RATSY
Milaza ny Baiboly fa i Satana no “andriamanitr’ity tontolo ity” ary miara-miasa aminy ireo demonia, izay anjely mahery sy ratsy fanahy.—2 Korintianina 4:4; Apokalypsy 12:9.
Toa an’i Satana ihany ireo demonia ka mifehy sy mamitaka olona. Niaiky toy izao ny apostoly Paoly: “Isika ... tsy mitolona amin’ny nofo aman-dra, fa amin’ireo fanjakana sy fahefana sy mpanjakan’izao tontolo anaty haizina izao, ary amin’ireo fanahy ratsy any amin’ny faritry ny lanitra.”—Efesianina 6:12.
Faly mampijaly olona ny demonia. Ny hitarika ny olona hiala amin’i Jehovah, ilay Andriamanitra Avo Indrindra, anefa no tena tanjony. (Salamo 83:18) Mifehy sy mamitaka ny olona izy ireo amin’ny alalan’ny fanandroana, mazia, famosaviana, sikidy, ary ny toy izany. Izany no mahatonga an’i Jehovah hampitandrina ny olona amin’ireny zavatra ireny. Arovany koa ireo rehetra manohitra an’i Satana sy ny demonia.—Jakoba 4:7.
MIAINA AMIN’NY “ANDRO FARANY” ISIKA
Hoy ny Baiboly, 2 000 taona teo ho eo izay: “Amin’ny andro farany, dia hisy fotoan-tsarotra tsy mora setraina.”
Fotoan-tsarotra ilay izy satria “ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho matin-kambo, hanambony tena, ... tsy ho tia ny mpianakaviny, tsy ho azo ifanarahana, ho mpanendrikendrika, tsy hahafehy tena, ho masiaka be, tsy ho tia ny tsara, ho mpamadika, ho be di-doha, ho mpieboebo, ho tia fahafinaretana fa tsy ho tia an’Andriamanitra.” Anisan’ny antony lehibe mahatonga ny fijaliana àry ny hoe “andro farany” izao.—2 Timoty 3:1-4.
Mazava amintsika izao hoe nahoana no tsy afaka manafoana ny fijaliana ny olona, na tsara fikasa toy inona aza. Aiza àry isika no hitady fanampiana? Any amin’ilay Mpamorona antsika, izay nampanantena fa “handrava ny asan’ny Devoly” sy ny mpanara-dia azy. (1 Jaona 3:8) Ho hitantsika ao amin’ny lahatsoratra manaraka izay hataon’Andriamanitra mba hanafoanana ny zava-drehetra mahatonga fijaliana.
Hizara Hizara Nahoana no Be dia Be ny Fijaliana?
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA Nahoana Isika no Mijaly Be toy Izao? Rahoviana Izany no Hifarana?
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA Nahoana Isika no Mijaly Be toy Izao? Rahoviana Izany no Hifarana?
Nahoana Isika no Mijaly Be toy Izao? Rahoviana Izany no Hifarana?
NY TILIKAMBO FIAMBENANA Nahoana Isika no Mijaly Be toy Izao? Rahoviana Izany no Hifarana?